Mogadishu Journal » Wasaarada Warfaafinta DF oo beenisay warar laga sii daayey warbaahinta gudaha
Wasaarada warfaafinta Somalia ayaa beenisay warar maanta lagu faafiyey baraha bulshada, isla markaana laga sii daayey warbaahinta madaxa banaan kuwaasoo sheegayey in ciidamo ka tirsan Villa Somalia ay la wareegeen xarunta Wasaarada.
“Shacabka Soomaaliyeed waxa aannu la socodsiinaynaa in aanu jirin ciidan qabsaday Wasaaradda Warfaafinta JFS” ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Wasaarada
Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in in amaanka wasaarada warfaafinta uu yahay mid sugan “Wasaaradda Warfaafintu waa hay’ad dowladeed, amnigeeduna wuu sugan yahay, waxaana masuul ka ah Hay’adaha Amniga Qaranka” ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka.
Duhurnimadii ciidamo dheeri ah oo ka tirsan koofiya Casta Madaxtooyada la geeyay gudaha dhismaha Wasaaradda warfaafinta sida ay xaqiijiyeen qaar kamid ah weriyayaasha ka shaqeeya warbaahinta dawladda.
Arrintan ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya uu amray in shaqadiisa uu sii wato” Fahad Yaasiin oo xilka madaxada Hay’adda Sirdoonka Soomaaliya uu ka qaaday Ra’iisul Wasaare Rooble.
Warbaahinta dowlada ayaa ilaa xalay si isku mid ah u baahinayey ilaa xalay wareegtooyinka iska horjeeda ee ay soo kala saareen Madaxweynaha iyo raisul wasaaraha dalka, kuwaasoo midna xilka looga qaaday taliyaha NISA, mida kalena lagu buriyey xilka ka qaadista.